ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖိလစ်ပိုင်သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Alex G. Chua အား လက်ခံတွေ့ဆုံ နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၆ - ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
Search Search လွှတ်တော် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ လုပ်ဆောင်ချက်များ အစည်းအဝေးများ မှတ်တမ်းများ ကော်မတီများ ဥပဒေကြမ်းများ သတင်းမီဒီယာကဏ္ဍ သတင်း လှုပ်ရှားမှုများ ဓာတ်ပုံများ ဗီဒီယိုများ မိန့်ခွန်းများ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ ဥပဒေများ သုတေသန စာကြည့်တိုက် ဝန်ဆောင်မှုများ စုဆောင်းထားရှိမှုများ စာအုပ်များ ဆက်သွယ်ရန် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး AIPA IPU You are hereအဖွင့်စာမျက်နှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖိလစ်ပိုင်သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Alex G. Chua အား လက်ခံတွေ့ဆုံ နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၆ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖိလစ်ပိုင်သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Alex G. Chua အား လက်ခံတွေ့ဆုံ နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၆ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖိလစ်ပိုင်သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Alex G. Chua အား လက်ခံတွေ့ဆုံ နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၆ | posted 6.01.2017
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖိလစ်ပိုင် သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Alex G. Chua အား ယနေ့ ၁၅၀၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသား လွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူ အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု တိုးမြှင့်ရေး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်